Lapel pin Factory - China Lapel pin Manufacturers na Suppliers
Ihe mkpuchi ọla kọpa ndị a zoro ezo jupụtara na Iomi Enamell, Ndị a na-ahụkarị lapel pin nwere agba mara mma ma nwee ezigbo mma, na-akọwapụta metal na zoro ezo., Achọghị mkpuchi epoxy,. Nhazi nka a gha emego uzo igwe, nke nwere udiri ihe siri ike.
Digital Bipụta lapel pin
Ihe ndị a dị mma American omenala lapel pin anyị nwere ike ịnabata omenala, ma ọ bụrụ na ị nwere ụdị nke gị ziga anyị faịlụ nka gị, anyị ga-e copyomi ụdị agba gị n'ime akwa lapel dị elu ma nyefee gị ya n'oge! dị, anyị ga-hụ na àgwà nke ngwaahịa nakwa dị ka mmepụta ụzọ oge.
Gịnị bụ ewute?
Gbakwunye ngwakọta nke ụcha ọkụ na enamel na ezumike nke ntụtụ nke ntụtụ gị ma ọ bụ mkpụrụ ego gị, wee kpuchie ya na dome epoxy iji chebe elu ma gbakwunye sheen na-egbuke egbuke.
Ọbụna na njedebe kachasị mma nke ọkụ na-enwu, ma gbakwunye ọkụ ọkụ na nhazi ahụ ị meworo. Nke a bụ ihe a ga - enwerịrị maka ụlọ akwụkwọ iji zụọ ahịa atụdo!
Mgbe ị nọ na ebe nkiri, n'ụlọ mmanya ma ọ bụ n'ọchịchịrị, ị hụla ka mmadụ na-enwu ọkụ? nke a bụ ihe eji ewu ewu ejiji na afọ ndị na - adịbeghị anya - lapel pin.
Ọchịchịrị enamel glow nke pinyere anyị bụ nke zuru oke mgbe ịchọrọ ntụtụ gị ka ọ pụta n’etiti igwe mmadụ ma ọ bụ n’ọchịchịrị
Y’oburu n’ile anya ime mkpuru enamel nke gi, eleghi anya ihula okwu a bu “enamel siri ike” na “nro enamel”. Ọtụtụ ndị nwere otu ajụjụ: Gịnị bụ ihe dị iche? Nnukwu ihe dị iche n'etiti enamel siri ike na nke dị nro bụ ederede agwụla. Ihe nkedo enamel siri ike na-adị larịị ma na-eji ire ụtọ, ihe mkpuchi enamel dị nro bulie n'ọnụ igwe. Methodszọ abụọ a na-eji otu ihe ahụ, ma ha abụọ ga-enwu gbaa. Mana enwekwara ụfọdụ nhọrọ pụrụ iche nke ewezuga naanị na enamel dị nro.
Nkedo Lapel pin
Mgbaji na-ebugharị esemokwu bụ otu n'ime atụmatụ pụrụ iche nke atụdo, nke nwere obere ngwaọrụ nwere ike ịme ka ị nwee ike imeghe ma mechie mkpọ. Ọ bụrụ n’inwekwu akara, ederede na slogans nke enwere ike gosipụta na atụdo, nke a bụ ngwa kachasị mma maka enwere akụkụ atọ enwere ike iji zipu ozi ahụ. Ọ bụ ezie na nke a bụ ọrụ dị mfe ma ọ bụ echiche, usoro ziri ezi na nke na-enweghị isi chọrọ nka nwere ahụmịhe, anyị bụ ndị ọkachamara n'ịmepụta mkpọ lapel. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ ndị nkịtị l ...
Ikanam-egbu maramara pin
Ikanam ìhè nwere ike ndokwasa na PCB na a zinc alloy ma ọ bụ igwe anaghị ata nchara lapel pin, na oyiyi akwa na azụ nwere ike a urukurubụba ipigide ma ọ bụ magnet.
Mee ka ezumike ezumike gị pụrụ iche n'afọ a na akara baajị oge a na-egbukepụ egbukepụ sitere na GlowProducts.com.
Kedu ihe kpatara eji etinye foto etched foto? Ọ bụ nhọrọ kachasị mma iji mee ka esere eserese foto ma ọ bụrụ na ịchọrọ pinel lapel dị larịị yana nkọwa doro anya. Dị iche na nke Cloisonne atụdo, nke na-akpụzi, foto etched Lapel Pins sculpt the design direct into the metal surface without riiji na ndagwurugwu ịkpụzi. Nke a na - eme ka nkọwa zuru ezu na imepụta ahụ pụta. Anyị na-amalite iji kọmputa na-achịkwa elu akụrụngwa etch ndị metal isi nke gị imewe. Anyị na-ahụ jupụta na agba gị oke na ọkụ nke ...
Lee ọmarịcha mma a na ntụgharị anyị pụrụ iche, nke na-egosi ọnwa nghọta nke obi. Ihe a na-acha uhie uhie na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ ma na-atọ ọchị! , uwe akwa nickel-plated. Ọ nwere akara mkpọchi nchekwa maka ọnọdụ zuru oke na mpempe akụrụngwa ọ bụla, eriri ma ọ bụ okpu.Ọ bụla bụ akpa polythene dị iche .Ka onyinye a bụrụ onye pụrụ iche na-arịa ọrịa obi ma ọ bụ bulie mmata.
N'adịghị ka ọnwu na-egbu egbu, ihe nkedo a na-egbu 3D na-egbu egbu na-egosipụta akara akara aka na oghere (mpempe igwe dị mma), ebe a na-eme ihe nkedo 3D na-anwụ site na-awụpụ ọla a wụrụ awụ na nnukwu nrụgide n'ime ihe emere imewe ebu
Ihe ekike bụ obere ihe ịchọ mma nke nwere otu mgbaaka ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ obere olu, na-adabere na baajị ọla igwe.
The dangle bụ a-akpali nnọọ mmasị pin. Anyị nwere ike ịhazi ọdịdị, nha, nhazi na ngwa nke paịlị lapel,
Die anọrọ lapel pin
Iferi Metal Designs na mgbagwoju anya nju
Omenala a kpụrụ akpụ nwere iferi metal imewe nke na-mgbukepụ n'okpuru ọ bụla ìhè isi.
Ọdịdị dị elu nke polish dị na lapels nke uwe ojii na jaketị mara mma, ebe atụ ndị a tụrụ atụ na ihe ochie na-emecha dị aghụghọ.
Ndị ahịa ga-ahụ enamel anyị dị nro ma ọ bụ cloisonne dị iche iche iji jikọta ma dakọtara agba na nhazi ha, mana maka ezigbo kpochapụwo, ịnwụ anwụ bụ nhọrọ kacha mma.